Kabini-computer umatshini ukunitha flat - China Taizhou Boding Imitshini
Computer machine ukunitha flat
Shoes vamp eliphezulu umatshini wokwenza
Kabini-computer machine ukunitha flat
DZ252S 52 intshi nge single buyo iinkqubo kabini mqengqeleki enye, devicde kufika-indawo mqengqeleki ukuhlangabezana nemfuno ukuqina for ukunitha buso .Equipped kunye nenkqubo alarm sokuzingela infrared, unako ngempumelelo ukuphepha ufakele alarm kunye inaliti kwizikrelemnqa. Le deviced nenkqubo smart kunye isivamvo infrared ukubona kuphela indawo ukunitha ukunqanda luphumelela miss. Buyani joint olawulwa mafutha banyathela ukunyusa isantya luzakutumela kunye nokuvelisa kunye siphephe kunxitywe of ...
DZ252S 52 intshi nge single buyo iinkqubo kabini mqengqeleki enye, devicde kufika-indawo mqengqeleki ukuhlangabezana nemfuno ukuqina for ukunitha buso .Equipped kunye nenkqubo alarm sokuzingela infrared, unako ngempumelelo ukuphepha ufakele alarm kunye inaliti kwizikrelemnqa. Le deviced nenkqubo smart kunye isivamvo infrared ukubona kuphela indawo ukunitha ukunqanda luphumelela miss. Buyani joint olawulwa mafutha banyathela ukunyusa isantya luzakutumela kunye nokuvelisa kunye baphephe kunxitywe komzila wenethiwekhi buyo.
Zobuchwepheshe yedijithali, ukuzalisekisa iipateni yokhutshelo, pointel, tuck, intarsia, jacquard, ithafa kabini jersery, imilo imilo kwacaca efihlakeleyo kunye neminye imisebenzi ukunitha pattern rhoqo. Nye eyodwa okanye kabini ijezi basic, rhoqo multi-imibala jacquard, intarsia, iintambo, pointel ilaphu. Efanelekileyo neyesilika, imichiza ifayibha, uboya, ifayibha acrlic, noboya engumxube, umqhaphu vulu ukunitha ijezi, ikhola, placket, emqukumbelweni, cuff, isikhafu, pocket, iibhulukhwe, kunye nezinye ilaphu ukunitha.
Iinaliti / Ububanzi 364needles / 52inches 364needles / 52inches 468needles / 52inches 520needles / 52inches 624needle / 52inches 728needles / 52inches 832needles / 52inches
Umsebenzi Main Nye eyodwa okanye kabini ijezi basic, rhoqo multi-imibala, jacquard, intarsia, iintambo, pointel ilaphu efanelekileyo isilika, imichiza ifayibha, uboya acrylic ifayibha, noboya engumxube, umqhaphu vulu ukunitha ijezi, ikhola, placket, emqukumbelweni, cuff, isikhafu , pocket, ibhulukwe, enye ilaphu ukunitha.
ukunitha System buyo Single iinkqubo kabini okanye iinkqubo ezintathu, neteknoloji yedijithali, ukuzalisekisa iipateni yokhutshelo, pointel, tuck, intarsia, jacquard, ithafa kabini jersery, imilo appaent, imilo efihlakeleyo kunye neminye imisebenzi Knitting pattern rhoqo.
Speed ​​ukunitha Max Isantya ukunitha 1.6m / S. 32 amacandelo speed ilawulwa servo motor.
Sitch Density 64 mninzi uluhlu lokukhetha 0-650 ungalawuleka banyathela motor, ecikizekileyo zombane lungisa technology.
dynamic Thunga Deviced zobuchwepheshe kwiteksti eliguqukayo, ukuphumeza yaseZimbabwe iindidi kwenye khosi kunye iintlobo mninzi in Ikhosi enye ukuphucula kniing efficency kunye ezahlukeneyo.
transfer ubambo transter Free iindlela kabini phakathi ngaphambili umva eedle ngexesha elifanayo akukho mda yi intshukumo buyo. Dlulisa, ubandakanywa ngabanye.
Sinker Sehla ulawulo motor le sinker adjustable ukufikelela ekuqulunqweni ezininzi kunye umsebenzi banzi.
Rackings omnye okanye ababini Motor drive unwele, ukufikelela 1/2 okanye 1/4 inaliti unwele kuso nasiphi na isikhundla. Double acking max 2.5 intshi kwicala elinye kunye kumacala kabini max intshi-5, deviced kumatshini 5G, 7G, kwaye 5 / 7G. 2inches Single unwele max, deviced kwi 9G, 12G, 14G, kwaye umatshini 16G.
Speed ​​High Return Buyani joine olawulwa mafutha banyathela ukunyusa isantya buyo productiviy kwakunye baphephe kunxitywe komzila wenethiwekhi buyo.
Icebo roller DZ252S deviced ne thabatha inqatha i-indawo mqengqeleki, DZ252S deviced ne up-isikhundla oller; 24sections zolawulo oluzenzekelayo kunye hlengiso kwicandelwana .Fulfil oku- ogqibeleleyo phantsi ngelaphu kunye nemfuno ukuqina for ukunitha portionable.
ntambo roller HIV ntambo mqengqeleki abalawula te ukuqina le vulu gurantee umgangatho laphu.
ntambo yenethiwekhi 2 * 8 abathwali vulu deviced nge-4 kumacala kabini wakuqhubela rail.
Safety cover umatshini Full ukunciphisa ad uthuli noice. sensor Cover, iqhosha engxamisekileyo, cima umbane wefowuni kunye isibonisi ukuqinisekisa ukhuseleko.
Auto Stop Machine auto stop xa ikhefu vulu, vulu edibeneyo wanamathela, roll ilaphu ngaphakathi, inaliti hit, ukucima kombane, Impazamo kunye nesiphelo program kwenzeka.
yenaliti detector Ifakwe nenkqubo alarm sokuzingela infrared, unako ngempumelelo ukuphepha ufakele alarm kunye inaliti kwizikrelemnqa.
System computer LCD monitor, touch screen, imbonakalo-mfanekiso, USB kunye imput ngomnatha, 1GB RAM ngenxa big ukugcina ifayile.Monitor: data Elisebenzayo, webhu data ezisebenzisa adjustable ngexesha kwimveliso msebenzi lula.
inkqubo lwenkqubo kunye nenkqubo yekhompyutha umatshini lula ukuhlaziya nokuxhasa cnt / HCDS / OOO ipateni ifayile.
operation Multiple ulwimi nkqubo iquka Chinese, IsiNgesi kunye nezinye iilwimi.
ifayile yongeno USB ke umnatha
Power Off Memory ICMOs advanced Deviced nobuchwepheshe, xa amandla kwenzeka ngaphandle data anganithi kunye ifayile igcinwa ukuze uqale ukunitha.
Connection Net Isantya esiphakamileyo (Ethernet), ubuninzi ukuqhagamshela oomatshini 254 ukuba ifayile yongeno azalisekise monior kunye nokwabelana data.
lobukhulu (Inkqubo kabini) L * W * H 2915 * 940 * 2010mm, (inkqubo amathathu) L * W * H3015 * 940 * 2010mm
Previous: -Inkqubo yekhompyutha machine ukunitha flat
Next: izihlangu inkqubo-Ezintathu vamp ephezulu umatshini wokwenza
6f 144n sock lwekhompyutha Icwangcisa Machine
Auto Flat nye Machine
Auto Heel Upper-Ngukhuleka Machine
oluzenzekelayo Flat Knitting Machine
oluzenzekelayo engenan- isikhuseli Knitting machine
oluzenzekelayo sock Knitting machine
X6 Automatic Cutting Machine
Backpart Ukubumbela Machine
Cheap Ixabiso Matshini For Ekhaya Sebenzisa
ikhola Flat Knitting machine
Ikhola Making Machine
Computer ulawulo Knitting machine
Computer Flat ukuluka Machine Nge Sinker
Computer Flat Knitting machine For Ihowuliseyili
iKhompyutha Knitting Machine
lwekhompyutha Flat Bed Knitting machine
lwekhompyutha isikhafu Flat bebandakanyiwe machine
Imishini ukuThunga lwekhompyutha
ingwenya HET Knitting Machine
Isilinda Die Cutting Press Machine
kabini-System Computer Flat Knitting machine
Ngelaphu Kuba ijezi Ukwenza Machine
Flat ukuluka Machine Nge Sinker
Flat Knitting machine Kuba Textile Industry
Flat Knitting Machine Nge Nikelani Good
Jacquard ngokupheleleyo Flat Bed Knitting Machine
Ngokupheleleyo Jacquard Flat bebandakanyiwe Machine
ngokupheleleyo Machine Knitting
isikhuseli Knitting machine
Umgangatho Good sweater Computer Knitting machine
Ubushushu Setting Machine
Home Knitting lwekhompyutha Machines
WeHooded ijezi Making Machine
Industrial isikhuseli Ukwenza Machine
Insole Machine Kudityaniswa
machine Ngokuba Slipper Upper
Manual ijezi Knitting Machine
Amadoda sweater Polo Ukwenza Machine
multi Gaug e Industrial Flat bebandakanyiwe Machine
Unamandla Hat Machine
Pu Isikhumba izithombe Machine
isikhafu Cap Knitting machine
isikhafu Knitting Machine
Uphawu Double System Single
Flat Knitting Single machine
Imishini System Single
Umtya Knitting machine
Amadoda sweater Ukwenza Machine
T Shirt Yoshicilelo Machine
Upper Ifaka Machine
Nethemba Upper Ifaka Machine
Upper engena Machine
Iwulu isikhafu Making Machine
Ewe Computer Knitting Machine
-Inkqubo yekhompyutha machine ukunitha flat